Jọ si n'oké osimiri wakporo 'Beachlọ Osimiri' nke Shudder.
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Jọ si n'oké osimiri wakporo 'Beachlọ Osimiri' nke Shudder.
by Timothy Rawles July 6, 2020 1,322 echiche
Shudder nọ na-enye ndị debanyere aha ọtụtụ ọdịnaya dị ukwuu n'oge ọrịa a na-efe efe na izu a abụghị otu. A na-edozi iyi egwu ahụ ịhapụ Beachlọ Beachsọ osimiri na July 9.
N'ebe a, anyị na-ahụ Emily na Randall ka ha na-aga njem nke oke osimiri nke ezinụlọ ya:
“Mitch na Jane Turner nọ na-egbochi njem ha n’oge ezumike, di na nwunye meworo agadi maara nna nna Randall hapụrụ. Nkekọ a na-atụghị anya ya na-etolite ka ndị di na nwunye hapụ ịhapụ ma nwee ọpụrụiche, mana ọ na-ewe mgbanwe dị egwu dị ka ihe ịtụnanya gburugburu na-esiwanye ike ịmalite ịmalite mgbede udo ha. Ka ihe ndị ọrịa butere pụta ìhè, Emily na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe na-efe efe tupu oge agaa. ”
Onye na-adọkpụ ụgbọala ahụ, nke na-eso n'okpuru, nwere mmetụta nke abụọ The ihe na Mwakpo nke Snatchers.
Director Jeffrey A. Brown nwere ndabere na ebe scouting na tinye n'ọrụ na nkà ahụ ịtọ ọnọdụ maka Beachlọ Beachsọ osimiri. Ọzọkwa, ọ chọrọ ịme ihe nkiri nke na-eme ka ojiji Cronenburg na-eji egwu egwu ahụ eme ihe, ya na John Carpenter na-enweghị atụ, na akụkọ gbasara HP Lovecraft.
Brown kwuru na nkwupụta banyere ihe nkiri ahụ:
“Beachlọ Osimiri bụ nnwale iji nwee mkparịta ụka ziri ezi, na nke eziokwu na ndị na-ege ntị. Achọrọ m iwere ihe m chere na-efu na fim dị egwu ma tinye nke ahụ na atụmatụ edemede na mmepụta. Nchegbu m nwere banyere mmalite nke mbibi gburugburu ebe obibi nyere ụgbọala m maka ụjọ ahụ, ebe mmasị nke sayensị evolushọn ghọrọ ihe microbial mmanụ a na-akọ n'akụkọ ahụ. ”
Beachlọ Beachsọ osimiri abịarute na Shudder July 9.